Faah-faahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay D/Afgooye – Hornafrik Media Network
Faah-faahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay D/Afgooye
Dagaalayaasha Al-Shabaab ayaa xalay dagaal xoog leh ku qaaday bar koontorol oo laga galo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Al-Shabaab ayaa dagaalkas ku qaaday halka loo yaqaano Mukayga oo fariisin ciidan ay ku leeyihiin ciidanka Booliska ee ka howlgal degmada Afgooye, waxaana halkas ka dhacay dagaal culus oo muddo saacado ah socdey.
Ilo wareedyo kala duwan ayaa noo sheegay in dagaalkaas ay ciidamada dowladda uga dhinteen ilaa afar askari, halka ay jiraan dhaawacyo kale oo aan la xaqiijin tiradooda, sidoo kale ilaa seddax qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay dagaalkii xalay.
Xaalada magaalada Afgooye oo afaafkeeda hore uu xalay ka dhacay dagaalkas ayaa saakay degan, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhinacyadii dagaalamay ee ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab, kaas oo ku aadan dagaalkii xalay iyo khasaaraha ka dhashay toona.
Cudur ay dad badani u dhinteen oo ka dilaacay dalka Shiinaha.
Khasaare ka dhashay Bam gacmeed lagu weeraray guri ay deganaayeen dad shacab ah